ADY AMIN’NY VAROTRA FANAFODY HOSOKA : Ny fampiasana holograma no mety ho vahaolana, hoy ny AMM
Miparitaka eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ny famarotana ny fivarotana fanafody hosoka. 13 juillet 2015
Misy mihitsy ny tambajotra matanjaka amin’ny fampidirana izany eto amintsika, ka na eo aza ny fanenjehana ny mpivarotra azy ireny dia tsy ho foana mihitsy izany raha tsy rava io tambajotra io. Vahaolana noentin’ny AMM na ny Agences de Medicaments de Madagascar ny fampiasana ny Holograma amin’ireny fanafody ireny.
Niaiky ny tompon’andraikitra eo anivon’ny AMM fa sarotra dia sarotra ny manaraka ireo fanafody tsy ara-dalàna sy hosoka eto amintsika. Tsy misy araka izany ireo vaovao mifandraika amin’ity famarotana fanafody an-tsokosoko ity. Ny fisian’ny tambajotra goavana izay mampiditra ireo fanafody ireo an-tsokosoko, ka hisiana firaisana tsikombakomba eo amin’ireo sokajin’olona matihanina sasany no tsy mahafoana ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna ireo.
Tsy misy mihitsy ny fanaraha-maso ny mety lalana hiafaran’ireny fanafody miditra eto amin’ny Firenena ireny noho ireto mpanelanelana ireto. Ny fampiasana ny holograma dia anisan’ny paikady hoentina hiadiana amin’ny fanafody hosoka kanefa dia mbola tsy nahazo ny fankatoavan’ireo matihanina eo amin’ity sehatra ity.
Ny fametrahana ny holograma anefa dia tsy maintsy hampiakatra ny vidin’ny fanafody raha tsy hoe angaha mahazo famatsiam-bola avy amin’ny Fanjakana indray. Mbola tsy fantatra ihany koa na hahomby na tsia ny fepetra horaisina satria misy laboratoara vahiny misahana manokana ny fanamboarana ireny fanafody hosoka ireny. Eo am-piandrasana izay mety ho paikady mahomby dia tsapa fa sarotra ny mifehy ny famarotana fanafody hosoka sy tsy ara-dalàna. Na ny firotsahana an-tsehatra nataon’ireo mpitandro ny filaminana tamin’ny faritra sasantsasany teto an-drenivohitra aza dia tsy nahasakana ny fiverenan’ireny mpanera na mpanelanelana ireny
Hosoka avokoa ny 35 % fanafody amidy
Ny 35 isan-jaton’ireo fanafody amidy ao Afrika dia hosoka avokoa. Raha mikasika an’i Madagasikara manokana dia amidy hatreny amin’ny farmasia na toeram-pivarotana fanafody efa manana ny toerany ireny mihitsy izany fanafody hosoka izany. Araka izany dia loza mitatao ho an’ny fahasalaman’ny daholobe ny fisian’izany toe-javatra izany.
Eto an-drenivohitra dia ny faritr’Ambohipo sy 67ha iny no tena malaza ratsy amin’ny famarotana karazam-panafody mampiahiahy. Ireo karazam-panafody toy ny fanalana fanaintainana sy ny antibiotika moa dia amidy eny an-tsenakely ary hita hatreny amin’ireny toeram-piantsonan’ny taksiborosy ireny. Ny ankamaroan’ireny fanafody ireny anefa dia hosoka avokoa. Ireo mpividy anefa dia tsy mahatsapa ny loza mety hihatra amin’izy ireo ary mihevitra fa manamora ny fiainany ireny toe-javatra ireny.
Mety ho hitan’izy ireo eny Ambohipo ohatra ireo karazam-panafody sasany izay tsy ananan’ny farmasia ara-dalàna eto an-toerana ary mbola mora ihany koa ny vidiny. Ankoatra izany dia mora ho azy ireo kokoa ny mividy antibiotika eny amin’ny mpivarotra tsotra toy izay handoa vola amin’ny fijerena dokotera izay manome ny taratasim-panafody tsy maintsy hovidiana.
Ilaina alalana avy amin’ny AMM
Fa na ireo toeram-pivarotana fanafody nahazo alalana hanao izany na ireo “depots de medicaments” eny na ireo farmasia malaza aza dia mivarotra fanafody hosoka ihany koa ankehitriny. Tsara, araka izany, ny fahafantarana fa na ireo fanafody antsoina hoe “princeps” na ireo antsoina hoe “générique” dia efa ahitana hosoka avokoa. Raha araka ny tokony ho izy dia tokony hahazo alalana amin’ny AMM na "Agence de médicaments de Madagascar" ny famarotana ireny fanafody samihafa ireny.
Ankoatra ny firaiketana an-tsoratra an’ireo fanafody dia manara-maso ny asa manodidina ny varotra fanafody manerana ny Nosy ary amin’ny sehatra miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana ity AMM ity.